Mufambo Weshizha - Mutungamiri Kikkoman Zhenji Chikafu Co, Ltd.
Vemhando yepamusoro Soy Sauce Brewing Technology
Yakakwira munyu mvura nyika soy musanganiswa wemidziyo isiri-GMO soymeal uye gorosi yesosi yedu soy. Yedu soy mchero inocherwa kupfuura yakati wandei nenzira yechinyakare uye nemazuva ano zvigadzirwa, inozivikanwa nekukara kwayo akapfuma uye nekunakirwa kwakanaka.
Kubatanidza zviitiko zvedu zvekugadzira ne Kikkoman's advanced technology, tinogona kugadzira chaiyo yepamusoro mhando soy mchero.
Vhiniga yekugadzira svutugadzike kuburikidza yakadzika mvura dhizaina, ine yakanyanya kujekesa vhiniga teknolojia yekugadzira patent.
Iyo yakadzika yevhiniga Fermentation tekinoroji yazvino vhiniga Fermentation tekinoroji, kambani yedu ndiyo kambani inotungamira maererano nehunyanzvi hwekugadzira uye zvigadzirwa.
Nekuwana yekumberi kusimukira kwepamberi nekutsvagawo tekinoroji pachedu, tichibatanidza pamwe nekunzwisisa kwedu kwakadzama paChinese tsika dzechinyakare, isu ticharamba tichikura nekugadzira zvimwe zvakakurumbira kune vatengi vedu.
Isu tinogara tichiedza kuchengetedza uye kwakakwirira mhando.
Isu tinogara tichiedza kuchengetedza uye kwakakwirira mhando yekuwana yakakwana mutengi kuvimba mune zvigadzirwa nemasevhisi edu.
Isu tinoita chirongwa chekumhanyisa mhando takasimba pasina kubvumirana, tichiratidzira muchirongwa chekugadzira gadzira, kuwongorora kwakawanda pane chero zvigadzirwa zvisati zvaunzwa, kuongororwa kwenyaya yekuongorora uye kutarisa nenguva nezvekuita zvinhu zvese zvekugadzira, pamwe nekumira kwevashandi pachigadzirwa chega chega. mutsara.
Kubva pakagadzwa, takawana zvitupa zvekumamisha nekune dzimwe nyika, zvinosanganisira ISO9001 (Quality Management System), FSSC22000 (Chikafu Chekuchengetedza System), ISO14001 (Environmental Management System), KOSHER (Kosher Zvitupa Zvekudzivirira), Kwete-GMO Identity Maintenance Certification neSGS , HALAL (HALAL Zvitupa Zvekudya Zvakapihwa neIslam Association of Shandong neMUI), nezvimwe .Kutenga, kugadzira, kutengesa uye zvimwe zvinongedzo pabasa racho, zvinotevedzera zvinodiwa nehurongwa hwechitupa, usatya kunonoka. Muna Chivabvu 2020, kambani yakaongororwa SMETA naSGS, iyo yakavandudza kukwikwidza kwayo pamusika wepasi rose.